मकाउविरुद्ध पछिल्लो पटक कसले गोल गरेका थिए ? | Hamro Khelkud
मकाउविरुद्ध पछिल्लो पटक कसले गोल गरेका थिए ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– मलेसियाको कुचिङमा जारी एएफसी सोलिडारिटी कपमा नेपालको सुरुआत गोलरहित बराबरीबाट भएपनि पछिल्ला दुई खेलमा भने नेपाल पाँच गोल गर्न सफल भयो ।
ब्रुनाईविरुद्ध ३ गोल गरेको नेपालले सेमिफाइनलमा निर्धारित समयमा २ गोल गरेको थियो । ५ मध्ये २ गोल विमल घर्तीमगरले गरेका थिए भने भरत खवास, नवयुग श्रेष्ठ र अनन्त तामाङले समान १ गोल गरिसकेका छन् । मकाउविरुद्ध गोल गर्ने खेलाडी भने अहिले टोलीमा छैनन् । सन् २००८ मा पछिल्लो एएफसी च्यालेन्जकपको छनोट चरणमा नेपालको भेट हुँदा मकाउलाई ३–२ ले हराएको थियो । त्यो जितमा जुमानु राईले २ र सन्दीप राईले १ गोल गरेका थिए । अहिले जुमानु र सन्दीप दुवै टोलीमा छैनन् । सन्दीप गत बर्ष म्याच फिक्सिङको अभियोगमा पूर्व कप्तान सागर थापा, पूर्व खेलाडी अन्जन कसी, गोलकिपर रितेश थापा र विकाससिंह क्षेत्रीसँगै फिफा÷एएफसीको आजिवन प्रतिबन्धमा छन् । मकाउविरुद्ध सन्दीपको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल थियो ।
तर गत बर्ष खेल मिलेमतोको अभियोगमा उनी कारवाहीमा परेका छन् भने आन्तरिक रुपमा पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । नेपाली टोलीका सफल स्ट्राइकर मध्येका एक जुमानु भने गत बर्षको भदौमा भारतविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलदेखि टोलीमा पर्न सकेका छैनन् । अहिले सम्म मकाउविरुद्ध सबैभन्दा बढी गोल गर्ने नेपाली खेलाडी भने नीराजन रायमाझी हुन् । उनले मकाउटविरुद्ध विश्वकप छनोटका दुई खेलमा ५ गोल गरेका थिए ।
२००१ मा भएको छनोटको पहिलो खेलमा नेपालले ४–१ ले हराउँदा नीराजनले २ गरेका थिए । अर्को खेलमा नेपाल ६–१ ले विजयी हुँदा नीराजनले ह्याटिक गरेका थिए । अहिले सम्म नेपाल र मकाउबीच ५ पटकको भेट भएको छ । जसमा नेपालले ३ खेल जितेको छ भने १ मा बराबरी र अर्कोमा हार बेहोरेको छ । पछिल्ला ३ भेटमा भने नेपाल मकाउसँग हार्नु परेको छैन । सफल इतिहासलाई निरन्तरता दिदै आज मकाउलाई हराउन सकेन नेपालले पहिलो पटक एएफसीको आधिकारिक प्रतियोगिता जित्नेछ ।